ဘရူနိုင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဘရူနိုင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
ဘရူနိုင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် (Malay: Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei; Jawi: لاڤڠن تربڠ انتارابڠسا بروني ) (IATA: BWN, ICAO: WBSB) သည် ဘရူနိုင်း နိုင်ငံ၏ အဓိက လေဆိပ်ဖြစ်သည်။ တော်ဝင် ဘရူနိုင်း လေကြောင်းလိုင်း ၏ အဓိက အခြေစိုက်ရာ လေဆိပ်လည်း ဖြစ်ပြီး ဘရူနိုင်း တော်ဝင် လေတပ်၏ အခြေစိုက်ရာ ကွင်းလည်း ဖြစ်သည်။
၂၂ မီတာ / ၇၃ ပေ
၃ လေကြောင်းလိုင်းများနှင့် ပျံသန်းရာမြို့များ
စီးပွားရေးအရ လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် ၁၉၅၃ ခုနှစ်ကပင် ဘရူနိုင်းနိုင်ငံတွင် စတင်ခဲ့သည်။ ဘရူနိုင်း လေဆိပ်သည် ဘရာကတ်စ် နယ်တွင် တည်ရှိပြီး လေယာဉ်ပြေးလမ်းမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်းက ဂျပန်တို့တည်ဆောက်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်ကတည်းက ဘရူနိုင်း လေဆိပ်ဟု လူသိများသည်။
၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များတွင် လေကြောင်းဖြင့် ခရီးသွားလာမှုများ ပိုမိုများပြားခဲ့သည်။ လေဆိပ်၏ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်သော ပမာဏ ထက် ပိုမိုခဲ့ကာ လေဆိပ် အသစ် တည်ဆောက်ရန် အခြေအေနများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။
လေဆိပ်အသစ်ကို သွားလာရ လွယ်ကူစေရန်အတွက် ဘရူနိုင်း-မူအာရာ ခရိုင်တွင် တည်ဆောက်ထားရှိသည်။ လေဆိပ်ကို ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ပြီး ဘရူနိုင်းကို နိုင်ငံတကာ နှင့် စတင်ဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၈၀ ခုနှစ်များတွင် လေဆိပ်၏ လေယာဉ်ပြေးလမ်းသည် အရှည်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် လေဆိပ်တိုးချဲ့ခြင်းအတွက် လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်သွားကာ တိုးချဲ့သွားမည်ဟု ကြော်ငြာခဲ့သည်။ တိုးချဲ့မှု စီမံကိန်းတွင် အဆင့်များစွာ ပါဝင်ကာ အဆင့်(၁) တွင် လက်ရှိ လေဆိပ်အဆောက်အဦး နှင့် ကုန်သိုလှောင်ရုံတို့ကို အဆင့်တိုးမြှင့်သွားရန် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ဆိုက်ရောက်ခန်းမ အသစ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အတူ အဆင့်(၁) ပထမပိုင်း ပြီးစီးခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အကုန်တွင် ခရီးသည် ၃ သန်း ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် လျာထားသည်။ အဆင့် (၂) မှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် စတင်ရန် ရည်မှန်ထားရှိသည်။ အဆင့် (၂) တွင် လေဆိပ်အဆောက်အဦး အသစ် တည်ဆောက်ရန် ဖြစ်ပြီး ခရီးသည် (၈) သန်းအထိ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ရန် စီမံထားရှိသည်။
လေဆိပ်တွင် ပြည်ပလေယာဉ်များ ဆိုက်ရောက်ရာ လေဆိပ်အဆောက်အဦး တည်ရှိပြီး အဆိုပါ လေဆိပ်အဆောက်အဦးသည် တစ်နှစ်လျှင် ခရီးသည် ၂ သန်းခန့်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။ လေဆိပ်ကုန်လှောင်ရုံ တည်ရှိပြီး ကုန်တန်ချိန် ၅ သောင်း ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ဘရူနိုင်း လေဆိပ်သည် ခရီးသည် ၁.၃ သန်း ခန့်ကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
Cebu Pacific [[Ninoy Aquino International Airport|မနီလာ]]
မလေးရှား လေကြောင်းလိုင်း ကွာလာလမ်ပူ-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
Royal Brunei Airlines ဘန်ကောက်-သုဝဏ္ဏဘူမိ၊ Denpasar, ဒူဘိုင်း-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ တန်ဆွန်းညက်၊ ဟောင်ကောင်၊ Jakarta–Soekarno-Hatta, Kota Kinabalu, ကွာလာလမ်ပူ-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ လန်ဒန်-ဟိသ်ရိုး၊ Manila, Melbourne, ရှန်ဟိုင်း-ဖူတုန်း၊ စင်ကာပူ၊ Surabaya, Zhengzhou
စင်ကာပူ လေကြောင်းလိုင်း စင်ကာပူ
operated by ဆစ်အဲ လေကြောင်းလိုင်း စင်ကာပူ
Busiest destinations from Brunei International Airport
3 ကိုတာ ကင်နာဘာလူး
↑ World Aero Data ရှိ WBSB အတွက် လေဆိပ် အချက်အလက်များ။ အောက်တိုဘာ ၂၀၀၆ အရ။ ရင်းမြစ်: DAFIF.
↑ Airport information for BWN/WBSB at Great Circle Mapper. Source: DAFIF (effective October 2006).
↑ Royal Brunei Plans Zhengzhou Operation from July 2016။ routesonline။ 17 June 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘရူနိုင်း_အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ_လေဆိပ်&oldid=510632" မှ ရယူရန်
၁၇ ဧပြီ ၂၀၂၀၊ ၁၄:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဧပြီ ၂၀၂၀၊ ၁၄:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။